Kusamira Zvakanaka kweNhandare yeSakubva Kwoshaisa Vagari vekwaMutare Nhabvu yePSL
Nhandare yeSakubva kwaMutare
Vagari vekwaMutare vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nePremier Soccer League, PSL, rekuti nhandare yeSakubva haikodzeri kutambirwa nhabvu sezvo isina kumira zvakanaka.
Danho rakatorwa nePSL rinova kuti chikwata chenhabvu cheMutare City Rovers, hachikwanisi kushandisa nhandare iyi kudzamara yagadziriswa sezviri kudiwa nePSL.
Izvi zviri kukonzera kunyunyuta kwevatsigiri vechikwata ichi, icho chinozivikanwa nerekuti Magusha. Nhandare iyi inonzi ine makomba zvakare inofanirwa kunge iine chivakwa chakapoteredza nhandare yacho.
Kumbovharwa kweSakubva Stadium kwapa kuti Mutare City Rovers itambe mitambo yayo kuGwanzura Stadium muHarare kudzamara Sakubva Stadium yagadzirwa sezvinodiwa nePSL.
Mumwe wevatsigiri vechikwata cheMutare City Rovers, VaIsrael Zulu, vanoti PSL yavabata neseri kweruoko sezvo vange vofarira kudzokera kwechikwata chavo munhabvu yepamusoro munyika.
“VePSL vatotishaishira stereki isusu vanhu vekuSakubva, isu tange tave ne-2yearsz tisina premier league hino izvezvi zvange zvatinakira tozi Magusha haatambirimo otambira Harare, hutori hutsinye hwaari kutiitira anhu ekwaMutare. MuZimbabwe munoumu haazi ose maground akanaka mumaguta madiki kunze kwekuFC. Platinum kuMandava. Atishaishira maningi zvavaita izvi,” VaZulu vanodaro.
Mumwe mugari wemaMutare, VaErick Chaipa, vanoti havaoni chakaipa nenhandare yavo yeSakubva.
“Isisu takatambira munhandare yedu iyoyo yakadaro kusvikira promotion yacho asi zvakuzi izvezvi stadium hayiiti, this is unfair on the part yehutungamiriri hwebhora. Saka kuti isusu tichienda kuHarare kunoona timu yedu, tinoenda neyi manje , this is unfair,” VaChaipa vakatsinhira.
Mugari wemumusha weChikanga, VaPeter Khumbula, vanoti havaoni chakaipa nekuti nhandare itange yakadziriswa sezviri kuitwa sezvo izere makomba nemakomba uye isina durawall.
“Zvitori right ngavatange vagadzirisa ground iri nekuti hariitiba, because rakadhakwa ground racho kuzara makomba ngavarishande rouswa durawall, first risati rashandiswa kutorikondema ndizvo chaizvo kuitira kuti varigadzire, vaifanirwa kunge vakazviita kare futi,” VaKhumbula vakadaro.
Mushandi wekanzuru yeguta reMutare, Muzvare Elizabeth Sibanda, vanoti vanotarisira kuti mukupera kwemwedzi waKurume kana unotevera wacho, vanenge vapedza basa rekugadzirisa nhandare iyi.
“Izvezvi tave ready kuti tinge tichishanda paground iri tiri pedze kugadzira nenguva kwayo. By mid-March or April tinenge tapedza naro sezvinhu zviri muprocess kudai,”Muzvare Sibanda, mushandi wekanzuru yeMutare vakadaro.
Nhandare yeSakubva inoshandiswawo nezvimwe zvikwata zviri muDivision One Eastern Region zvinosanganisira Buffaloes, inova timu yemasoja, uye Tannex timu yevePrisons.
Nhandare iyi inopinda vanhu zviuru gumi nezvishanu kuti izare.